सामसुङ र हुवावेईका स्मार्टफोनमा आउँदै एन्ड्रोइड पाइ अपडेट
२०७५ पौष १३ शुक्रबार, काठमाडौं । एन्ड्रोइड स्मार्टफोनहरुको नाम लिने हो भने सबैभन्दा अगाडि आउँछन्– सामसुङ र हुवावेई । यी दुई कम्पनीहरु विश्वको सबैभन्दा बढी स्मार्टफोन बिक्री गर्ने मुलुकहरु हुन् । ... बाँकी अंश»
५जी मा चीन र अमेरिकालाई चुनौती दिँदै फिनल्याण्ड
२०७५ पौष १३ शुक्रबार, काठमाडौं । पछिल्लो समय अमेरिका र चीन ५जी सेवा कसले पहिला ल्याउने भन्नेबारे प्रतिस्पर्धाको क्रममा रहेका छन् । यस्तोमा फिनल्याण्ड उनीहरुलाई चुनौती दिने मुलुकको रुपमा उदाउँदैछ । ... बाँकी अंश»
हुवावेईलाई अर्को झड्का, हुवावेईको प्रयोगप्रति खनिए बेलायती रक्षामन्त्री
२०७५ पौष १२ बिहिबार, काठमाडौं। बेलायती रक्षामन्त्री ग्याभिन विलियम्सनले हुवावेको ५जी नेटवर्कको उत्पादनप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनले राष्ट्रिय सुरक्षामा आघात पुग्नसक्ने भन्दै हुवावेईको प्रयोग रोक्नुपर्ने बताएका हुन्। बुधबार उनले हुवावेईको सेवाबारे नजिकैबाट नियाल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। ... बाँकी अंश»
सर्वोच्चको आदेशसँगै फ्रिक्वेन्सी लिलाम प्रकृया रोकियो
२०७५ पौष १२ बिहिबार, काठमाडौं । नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणको गत पौष ४ गतेको फ्रेक्वेन्सी अक्सन सम्बन्धी निर्णय रोकिएको छ । ... बाँकी अंश»
पाँच रेयर क्यामेरासहितको नोकिया ९ आउँदै, के के छन् विशेषता ?
२०७५ पौष ११ बुधबार, काठमाडौं । एचएमडी ग्लोबलले पाँच रेयर क्यामेरासहितको नोकिया ९ ल्याउने भएको छ । अहिलेसम्म यो स्मार्टफोन आउने मिति तय गरिएको छैन तर यो स्मार्टफोनको तस्वीर भने सार्वजनिक भइसकेको छ । ... बाँकी अंश»
मलाई पदको लोभ छैन, जुनसुकै बेला राजिनामा दिन तयार छु : अध्यक्ष झा
२०७५ पौष ११ बुधबार, काठमाडौं। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले आफूलाई पदको लोभ नभएकोले सरकारलाई असजिलो बनाएर आफु पदमा नबस्ने स्पष्ट पारेका छन्। उनले भने,‘मलाई कुनै पदको लोभ छैन। काम गर्न पाए हुन्छ। भोलि त्यस्तै अवस्था आयो भने, म स्वेच्छाले यो सरकारलाई सजिलो पार्नलाई, किनभने मेरो कारणले यदि सम्मानीय प्रधानमन्त्री र मन्त्रीज्यूहरुलाई समेत बद्नामी हुन्छ भने म यो पद जुनसुकै बेला छोड्न पनि तयार छु ।’ ... बाँकी अंश»
चीनमा आईफोन बहिष्कार, हुवावेका फोनलाई भारी छुट
२०७५ पौष १० मंगलबार, काठमाडौं । सुरक्षा जोखिमको मामिलामा विभिन्न मुलुकहरुमा अनुसन्धान तथा प्रतिबन्धको सामना गरिरहेको हुवावेलाई चिनियाँ कम्पनीको साथ मिलेको छ । ... बाँकी अंश»
उडानको क्रममा भारतीय इन्टरनेट ५० गुणा महंगो
२०७५ पौष १० मंगलबार, काठमाडौं । भारतमा उडानको क्रममा मोबाइल सेवाको शुल्क निकै महंगो पर्ने गरेको छ । स्याटेलाइट ब्यान्डविथको शुल्क यसको कारण हो। एक उद्योग अधिकारीका अनुसार यसले यो सेवामा ३० देखि ५० गुणा महंगो हुन्छ र यात्रुहरूलाई दुई घण्टाको यात्रामा ७ सय देखि हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । ... बाँकी अंश»
२०१८ का आकर्षक स्मार्टफोनहरु
२०७५ पौष ८ आइतबार, काठमाडौं । सन् २०१८ स्मार्टफोनको हिसाबमा निकै महत्वपूर्ण रहनपुग्यो । यो अवधिमा धेरै कम्पनीहरुले उत्कृष्ट फिचर्सहरुको साथमा केही महत्वपूर्ण स्मार्टफोनहरु अघि सारे । ... बाँकी अंश»
'भिखारी' खोज्दा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीको तस्वीर, गुगलसँग मागियो स्पष्टीकरण
२०७५ पौष ८ आइतबार, काठमाडौं । तपाइँले कहिल्यै गुगलमा भिखारी लेखेर खोजी गर्नुभएको छ ? भिखारी भनेर खोजी गर्दा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानको तस्वीर आउँछ । यो विषय पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा चर्चाको विषय बन्न पुगेको छ । ... बाँकी अंश»
सबैभन्दा बढी बिकेका मोबाइलहरु
२०७५ पौष ७ शनिबार, काठमाडौं । अहिले प्रायः सबैको हातमा मोबाइल हुन्छ । मोबाइलको कारण विश्व नै साँघुरिएको छ । ... बाँकी अंश»
२०१८ का सबैभन्दा लोकप्रिय मोबाइल गेमहरु
२०७५ पौष ७ शनिबार, काठमाडौं । पछिल्लो समय स्मार्टफोन प्रयोगकर्ताहरुको संख्या बढ्दो क्रममा रहेको छ । यस्तोमा स्मार्टफोनहरुका लागि लक्षित गरी ल्याइएका गेमको पनि लोकप्रियता बढ्दो क्रममा रहेको छ । ... बाँकी अंश»
के पूरा होला त चीनको चन्द्रमा बनाउने सपना ?
२०७५ पौष ५ बिहिबार, काठमाडौं । चन्द्रमाको प्रकाश र शीतलताको धेरैले प्रशंसा गर्ने गर्छन् । अझ सधैं चन्द्रमा उदाइरहने भए कस्तो हन्थ्यो होला ? चीनले केही समयअघि यस्तै योजना अघि सारेको थियो । जसअनुसार आकाशमा तीनवटा कृत्रिम चन्द्रमा बनाउने तयारी गरिएको छ । राति सडकहरुमा उज्यालो छर्नका लागि चीनले यस्तो योजना ल्याएको हो । ... बाँकी अंश»
गुगलको न्युयोर्कमा १ अर्ब डलरको लगानीको योजना
२०७५ पौष ४ बुधबार, काठमाडौं । गुगलले न्युयोर्कमा १ अर्ब डलरको मुख्यालय बनाउने भएको छ । सो क्षेत्रमा कम्पनीको व्यापार उल्लेख्य मात्रामा विस्तार भइरहेको अवस्थामा कम्पनीले यस्तो योजना अघि सारेको हो । ... बाँकी अंश»
२०७५ पौष ४ बुधबार, सिंजा, जुम्ला ।तीन गाउँपालिका रहेको सिंजा क्षेत्रमा अझै टेलिफोन सेवा पुग्न सकेको छैन । टेलिफोन सेवा उपलब्ध नहुँदा सिंजावासीलाई सास्ती भएको छ । ... बाँकी अंश»
२०७५ पौष ३ मंगलबार, वासिङ्टन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले साजाजिक सन्जालमा प्रभुत्व जनाएका फेसबुक, ट्वीटर र गुगलजस्ता कम्पनीहरू प्रतिपक्षी दल ‘डेमोक्रेटिक पार्टी’को पक्षपोषणमा लागेको आरोप लगाएका छन्। ट्रम्पको सामाजिक सञ्जालविरुद्धको उक्त आरोप सन् २०१६ को राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा रसियाली एजेन्टहरूले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी ट्रम्प ... बाँकी अंश»
टेलिकम धरासायी बनाउन मन्त्री बाँस्कोटाको चलखेल, ४जीको टेण्डरमा गिद्दे नजर
२०७५ पौष ३ मंगलबार, काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चार मन्त्री गोकुल प्रसाद बाँस्कोटाले नेपाल टेलिकमको काममा निरन्तर हस्तक्षेप गर्दै यसलाई धरासायी बनाउने खेलमा लागेका छन् । ... बाँकी अंश»
२०७५ पौष ३ मंगलबार, बैतडी । गए रातिदेखि बैतडी र दार्चुलामा नेपाल टेलिकमले प्रदान गर्ने जीएसएम मोबाइल सेवा अवरुद्ध भएको छ । टेलिकमले प्रदान गर्दै आएको नमस्ते जीएसएम मोबाइलको पोष्टपेड र प्रिपेड सेवा सोमबार रातिदेखि अवरुद्ध भएको हो । ... बाँकी अंश»
म्यारिओट साइबर आक्रमणमा चिनियाँ ह्याकरको संलग्नता
२०७५ पौष ३ मंगलबार, काठमाडौं। अमेरिकाको म्यारिओट होटलमा भएको साइबर आक्रमणमा चिनियाँ ह्यारको संलग्नता हुनसक्ने एक विवरणले देखाएको छ। यो आक्रमणको विषयमा अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरुले चिनियाँ ह्याकरको संलग्नता हुनसक्ने बताएका हुन्। म्यारिओट होटलमा भ ... बाँकी अंश»
हुवावे नोभा ४ सार्वजनिक, यस्ता छन् विशेषता
२०७५ पौष २ सोमबार, काठमाडौं । चिनियाँ स्मार्टफोन निर्माता हुवावेले चीनमा नोभा ४ सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले ४८ मेगापिक्सलको रेयर क्यामेरासहितको केही महत्वपूर्ण फिचर्सहरुको साथमा यो समार्टफोन ल्याएको हो । ... बाँकी अंश»